Ny Apple TV + andiany ho an'ny olombelona rehetra, mety hanana vanim-potoana fahefatra | Avy amin'ny mac aho
Ny andiana Apple TV + ho an'ny zanak'olombelona rehetra, mety hanana vanim-potoana fahefatra
Ho an'ny zanak'olombelona rehetra dia iray amin'ireo andian-tantara izay tsy misy voninahitra be ao amin'ny Apple TV + fa tsy atao anonyme koa. Eo izy dia maharitra amin'ny fotoana mifanohitra amin'ireo singa rehetra ary midika izany fa samy resy lahatra tanteraka na ny mpampiasa na ny mpitsikera. Hitanay vetivety ny fanombohany ny vanim-potoana fahefatra amin'ity andiany ity. Farafaharatsiny izany no voalaza ao amin'ny sehatry ny tsaho.
Ho an'ny zanak'olombelona rehetra, ity andiany ity momba izay mety hitranga raha nitohy ny hazakaza-kazo teo amin'ny Etazonia sy ny Firaisana Sovietika, nahasarika ny besinimaro sy ny mpitsikera mandritra ny vanim-potoana telo anaovana ny andiany. Real roa sy ny horonan-tsary fahatelo ankehitriny ary hitondra antsika soa aman-tsara any Mars. Amin'ity vanim-potoana faharoa ity dia lafo ny famoahana azy io, noho ny fahasahiranana marobe nefa indrindra ho an'ireo faly Valan'aretina coronavirus. Na izany aza, Efa eo amin'ny efijery io ary afaka milaza isika fa mahomby.
Raha ny voalaza, dia azo inoana kokoa fa hanomboka ny vanim-potoana fahefatra ary tsy mahagaga izany, satria efa tamin'ny fotoana niresahana ny mety hisian'ity andiany ity farafaharatsiny fizaran-taona 7. Ny material dia nanana araka ny mpanoratra azy, ankehitriny, ny fanontaniana dia hoe hankatoavin'ny mpijery izy io ary toa izany.
Avy amin'ny fampahalalana momba io fizarana fahefatra io Mpanoratra Guild of America. Olona maromaro no voatanisa izay hanohy hiasa amin'ilay andiany mandra-pahatonga ity vanim-potoana vaovao ity. Raha ny fotoana ahafahantsika manantena ny hahita ny vanim-potoana 4 ho an'ny olombelona rehetra dia mila miandry kely isika. Amin'ny vanim-potoana fahatelo kasaina hatao amin'ny tapaky ny 2022, dia azo antoka ny milaza izany 2023 no voalohany azontsika antenaina amin'ny fizarana efatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ny andiana Apple TV + ho an'ny zanak'olombelona rehetra, mety hanana vanim-potoana fahefatra
Raha malahelo ny Snow Leopard Safari ianao dia azonao atao izao ny mametaka azy amin'ny Mac misy anao ankehitriny
Discord dia manampy ny asan'ny kofehy andrasana ao amin'ny kinova ho an'ny macOS